Ciidamada Itoobiya oo ku wajahan Baydhabo iyo Qax ka bilowday magaaladaa – SBC
Ciidamada Itoobiya oo ku wajahan Baydhabo iyo Qax ka bilowday magaaladaa
Wararka ka imaya Gobolka Baay ayaa sheegaya in halkaasi ay ka jiraan xiisado dagaal iyo cabsiyo ka taagan deegaanada qaar oo ay ka mid tahay magaalada Baydhabo xarunta gobolkaasi.
Sida ay sheegayaan wararka qaar ciidamada DKMG ah iyo kuwa dowlada Itoobiya ayaa ku wajahan magaalada baydhabo xarunta gobolkaasi Baay ka dib markii ay ka soo gudbeen deegaano ka tirsan gobolka sida deegaan lagu magacaabay Bohol bashiir iyo Bardaale sida ay saxaafada u sheegeen qaar ka mid ah saraakiisha DKMG ah ee gobolkaas.
sidoo kale Saraakiisha DKMG ah ayaa sheegay in magaalada Baydhabo ay u jiraan wax ka yar 50 Km inkastoo ay jiraan warar sheegaya in ciidamadu ay ku sugan yihiin Deegaan lagu magacaabo Awdiinle oo Baydhabo u jirta 15 km.
Dadka ku dhaqan magaalada Baydhabo ayaa muujinaya Cabsi xoogan iyagoona qaarkoodba bilaabay in ay ka barakacaan guryahooda iyagoona beegsanaya deegaanada Miyiga ah ee ka fog magaalada iyo halka ay is orankaraan waxaa ka dhici kara dagaal labada dhinac waa dowlada KMG ah iyo kuwa Alshabaabe ka dibna ay iyagu khasaare ka soo gaari karto.
Shalay ayay aheyd markii gudoomiyaha Baarlamanka DKMG ah Shariif Xasan Sh aadan uu sheegay in gobolka Baay sida ugu dhaqsiyaha badan ay gacanta Dowladu soo geli doonto.
Sikastaba ha ahaatee lama xaqiijin karo xaaladu halka ay mareyso iyo hadii ay jiraan khasaare ka dhashay isku dhac meelaha qaar ay isaga horyimaadeen dhinacyada sida deegaanka Bardaale oo sida laga warqabo uu ka dhacay dagaal lagana maqlayay shalay ilaa maanta gelinkii hore rasaas xoogleh.